Dhibaatooyinka suurtagalka ah ee ku jira baloogyada | Laga soo bilaabo Linux
Waad salaaman tihiin dhamaantiin. Waxaan dareemayaa inay waajib igu tahay inaan kugu wargaliyo inay macquul tahay in laga bilaabo maanta aad la kulanto cillado qaarkood hawlgalka baloogga ka dibna waxaan kuu sharaxayaa waxaas oo dhan inay sabab u yihiin.
Maalmihii la soo dhaafey waxaan la kulmey dhibco taxane ah sida muuqata waxaan heleynaa gaadiid aad u badan. Marhore ayaan kiraystay jabsadayaasha Ruushka si ay wax uga ogaadaan. 🙂
Waxaa na hagayey tirakoobka JetPack, halkaasoo booqashooyinkii ugu badnaa ee uu blogku soo gaadhay ay ahayd shalay: 12 098. Laakiin waa nala khiyaaneeyey, kuwa badan baa jira. La tashiga taraafikada qalab kale, waxaan ogaaneynaa in xaqiiqda shalay aysan aheyn 12 098, haddii kale 17 702. 😮
Mid ka mid ah tallaabooyinka aan qaadnay waa inaan ku rakibno fiilo keyd ah WordPress. Waxaa macquul ah in qaar ka mid ah ay dareemeen horumar xawaare gaar ah marka la helayo qodobbada waana mid si sax ah u sabab ah taas, tan iyo markii la yiri plugin ayaa u adeegta codsiyada si dhakhso ah (hadda maahan kiiska in la sharaxo sida ay u sameyso).
Dhibaatadu waxay tahay in dhinacba ay naga caawinayso, laakiin dhinaca kalena ay na saameyneyso. Marka qalabka wax lagu keydiyo maqaal sawirradiisa leh, tani waxay saameyn ku yeelan kartaa waxaad aragto muddo 10 daqiiqo ah, maadaama tani ay tahay waqtigii aan u dejin lahayn inaan cusbooneysiino keydka. Calaamadaha dhibaatada waxaan ka helnaa:
Tirada jeer ee boostada la akhriyay lama cusboonaysiin karo.
Tirada faallooyinka lama cusbooneysiin.
Astaamo kale ayaa laga yaabaa inay ka muuqato dhinaca dhinaceeda, iyagoo leh tusaale ahaan waxaad isticmaaleysaa Windows.
Kuwani waa qaar ka mid ah dhibaatooyinka aan ogaanay.
Waxaan u qaabeynay qalabka wax lagu keydiyo kaliya markii aadan aheyn isticmaale diiwaangashan. Waxaan ka joojineynaa doorashadan Qorayaasha, Tifaftirayaasha iyo Maamulayaasha si markaa boostada si sax ah loo soo bandhigo. Waxaa jira waxyaabo badan oo dheeri ah oo laga fiirsado, laakiin kii wax ka beddelay wuxuu ahaa KZKG ^ Gaara oo hadda wuxuu Kiiloomitir ka fog yahay marinka internetka, sidaa darteed waxyaabo badan oo aan fiicnayn ayaa dhici kara.
Way fiicnaan lahayd haddii ay na siiyaan jawaab-celin ku saabsan cilladaha ay ogaan karaan. Waxaan kaa raaligalinaynaa wixii cillad ah ee kaa dhalan kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Dhibaatooyinka suurtagalka ah ee barta
48 faallooyin, ka tag taada
Halkan waxaan uga imid Mexico wax kasta oo aan dhibaato lahayn ...
Jawaab Mauricio Baeza
Waad ku mahadsantahay Mauricio 😉 😉
Khalad !!! Waxay leedahay waxaan isticmaalayaa Android ... ooohhh sug, waa inaan isticmaalo Android! Hehehe
Dhammaan helitaanka wanaagsan ee ka socda Mareykanka
xDDD Mahadsanid bro
Waqtigan xaadirka ah, boggan wuxuu u rarnaa si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd, markaa waxay u muuqataa in, ugu yaraan kuwa naga mid ah ee ku dhibaataysan "koox cidhiidhi ah", xalka ayaa ahaa mid wanaagsan. Faahfaahinta inteeda kale, dhibaato la'aan, si sax ah u aqoonso distoorka, ku dheji sawirada dhibaato la'aan (ama kuwani horeyba ugu jiray keydkayga), iwm. Haddii ay dhacdo inaan wax ogaado, waan kula soo socodsiin doonaa.
Waan ku faraxsanahay inaan ogaado taas .. gadaal ayaad noo sheegi doontaa 😉
Marka, markii qoraal cusub ama faallo la daabaco, dhammaan xogta waxaa lagu diray codsi qoraal ah oo feyl ah, aan ugu yeerno process.php. Halkaas ayaa lagu falanqeeyay iyo haddii ay buuxisay shuruudaha tayada. Waa la cusbooneysiiyay, ama faallooyinka cusub ayaa lagu daray bogga u dhigma html ama bog cusub ayaa la sameeyay iyadoo wax laga beddelayo daboolka. Way yara weyday, inay xasilloonaato. Laakiin sida xaqiiqada ah qof ayaa horumariyay wax la mid ah. WordPress ayaa sii kordheysa ganacsiga. Dalbashada ilo dheeri ah, oo markaa ka faa'iideysanaya shirkadaha martigelinaya ee bixiya qorshooyinka culus ee sii kordhaya.
Muddooyinkan dambe wax dhibaato ah kama jiraan shabakadda, marka lagu daro ka faallayntayda 'Sony Ericsson W200' ee aan la leeyahay Opera Mini 4, marka lagu daro ka faallaynta kombuyutarkayga Iceweasel, marwalba way ii muuqataa aniga markii aan faallo ka bixinayo in aan isticmaalo Linux From Scratch (maadaama ay adag tahay waxay u muuqataa «GNU / Linux"), laakiin qaybta "Si aad u gasho FromLinux, waxaad isticmaashaa ...", waxay si sax ah ii aqoonsan tahay inaan isticmaalo Debian.
Aynu aragno haddii Debian ii aqoonsan yahay inaan yahay nidaam ka hawlgala Iceweasel markaan faallo ka bixinayo.
Muuqaalkaan ayaan kuu sixi doonaa isla marka aan daqiiqado helo 😉
Waxay adeegsan karaan AJAX si ay u codsadaan macluumaadkaas aan la kaydin karin, dhibaato la mid ah ayaan ku qabay Varnish xalkeeduna wuxuu ahaa in la isticmaalo AJAX. salaan
Qaybtayda halkan, boggu wuu dhacay, wuu rarmayaa wuxuuna i siiyay qalad 404 ah.
Sidoo kale, qeybta adeegsadaha waxay ku tiraahdaa waxaan Ubuntu uga isticmaalaa Windows: S!
Rajada in dhibaatooyinka la xaliyo!
Dhammaan way kafiican yihiin IP-kan (oo aanan dhihi doonin laakiin waxaan ka shakisanahay inaad ogtahay)
Maan arag wax gaabis ah goobta. Haddii aan arko wax aan caadi ahayn isla markiiba waan kula soo socodsiin doonaa.
PS: Elav, ee Debian 7 iyo QEmu post waxaan ku weydiiyay su'aal adna waad iiga tagtay jawaab la'aan. Wali waan sugayaa iyada 😛
Oops .. hada waan hubiyaa 😛
xD markii aan ahaa isticmaale aan diiwaangashanayn, astaanta linux kamay muuqan xDDD ehehhe
wax aan caadi ahayn xilligan
Ka warbixinta Costa Rica. Horta war maleh!
Laga soo bilaabo Windows… 🙁 sidoo kale wax dhibaato ah ma jiraan.
Waa hagaag, waxay ahayd waqtigii la isticmaali lahaa kaydinta, dhibaatooyinka soo raaca way dhammaadeen, xitaa waxaan ku dhiirranayaa in aan idhaahdo muujinta nidaamkii loo adeegsaday helitaankiisa, wax badan kama seegi doono, muhiimaddu waa nuxurka maqaalka.
Laga soo bilaabo Madrid, oo leh OpenSuse 12.3 iyo Firefox 20, dhib malahan (hadda).
Ku jawaab Konzentrix
Hagaag, hadday dhihi waayaan, anigu ma arko wax walba inay si habsami leh uga socdaan Dominican Republic.
Mararka qaar markaan galayo blog-ka waxay igu wareejisaa bog p0rn0 ... mise waxay ahayd si kale oo hareeraha ah?
Sug, sug ... Maríaaaaa ka waran aniga?
Blog aad u fiican.
Waa hagaag, sababtaas darteed Argentina, wax dhibaato ah kuma qabin BLOG… .Waa hagaag !!
Waan ka xumahay su'aasha ku saabsan LIbreOffice.
Ma iga caawin kartaa astaamahayga… Sideen u hawlgeliyaa Bar-tilmaameedka: Foomka Navigation-ka ee LibreOffice? So Marka waan arki karaa astaamaha oo aan wax ka badali karaa, waa sheyga kaliya ee aan u baahanahay in wax looga beddelo halbeega 'monochrome icon' Or .. Ama file noocee ah ayaan sameeyaa si ay astaamahan u muuqdaan?
goobta ayaa ii sheegaysa inaan isticmaalo Ubuntu
ugu yaraan faallooyinka ma jiraan wax dhibaato ah, wixii ka baxsan goobtaas ayaa qumman
Aniga ayay igu dhacday in ay Windows u muujiso nidaam ahaan… .SACRILEGOS.
Kani ma qoraal kale oo aad ku tijaabinayso faallooyinkaaga?
Waxay noqon kartaa, laakiin nasiib daro, nidaamka ogaanshaha nidaamka qalliinka waa in lagu sifeeyaa waxyar oo dheeri ah iyada oo loo marayo wakiilka isticmaalaha, sidoo kale ma fahmin marka aan wax faalloonayo, waxay ila muuqataa inaan isticmaalo Iceweasel, laakiin nidaamka qalliinka , I Waxay u muuqataa inaan haysto Linux From Scratch (LFS) markii dhabtii aan isticmaalo Debian (marka laga reebo qaybta "Si aad u hesho FromLinux, waad isticmaashaa ..." waxay igu ogaaneysaa inaan isticmaalo Debian).
Isla marka aan soo galo bogga anigoo adeegsanaya Habeenkii Chromium-ka ee aan ku adeegsado Windows-ka, had iyo jeer wuxuu ii sheegaa inaan Google Chrome u adeegsado nooca loo yaqaan 'Chromium Nightly' (dhibaatadu waxay ahayd Wakiilka Isticmaalaha, kaas oo halkii uu dhihi lahaa Chromium ii sheegayaa Chrome. Waxa muuqda aniga ahaan waxaan isticmaalaa nooc ka mid ah Chrome oo umuuqda inuu mustaqbalka ka imanayo).
iyada oo sababtu aysan u shuban bogga mararka qaarkood, cusbooneysiinta "xallinaysa"
Mid kale oo Windows u muujiya nidaam ahaan halkii laga isticmaali lahaa Chakra. Dhib ma leh, waan u dulqaadan karaa ... laakiin si dhakhso leh u hagaaji 🙂
Waxaan si otomatig ah ugajawaabaa: kadib markaan dhajiyay faallada waa la hagaajiyay. Taasi waa waxa aan ugu yeeray xawaare, shaqo fiican 😉
Waxay sheegtay inay ku jirtay Windows, Ilaahay ha xifdiyee: 3 ...
Wax walba waxaa loogu talagalay wanaagga barta blog
Weligeed maskaxdaada miyay ka gudubtay inay isticmaali lahaayeen Drupal halkii laga isticmaali lahaa WordPress? Sababtoo ah WordPress, cilladda ugu weyn ee ay leedahay waa xasillooni darro markii la helayo koox booqashooyin ah, laakiin ma aqaano haddii aad adigu. Waxay leeyihiin waayo-aragnimo markay isticmaalayaan oo ay awood u leeyihiin inay u guuraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin CMS-kan (sida CMF ka badan CMS sababo la xiriira sahlanaanta maamulka marka la isticmaalayo Drupal Shell).
Sikastaba, waxay ilatahay aniga in barta waxbadan hagaajisay markay tahay rarka, laakiin waxaan soo jeedin lahaa adeegsiga Drupal, maadama naqshadeedu ay aad uga badantahay qaabka WordPress-ka iyo heerkeeda u qaabeynta ayaa aad uga wanaagsan WordPress.
Drupal? Waddo ha loo socdo. Kaliya maahan inuu ka weyn yahay kana culus yahay WordPress, laakiin sidoo kale waxaan u adeegsan doonnaa si ka hooseeya.
Anigu ma wadaagayo in WordPress uu yahay mid aan degganeyn, maxaa yeelay WordPress.com wuxuu ku tusayaa kaliya wax iska soo horjeeda. Iyo wax kale, inkasta oo aanan runtii arkin sida loogu qaabeeyey Drupal, iyadoo WordPress sameynta mowduuc uusan kaa qaadayn wax ka badan 2 saacadood ... i rumee. Ma fududaan karin.
Waxay ii sheegaysaa inaan daaqadaha u adeegsado si aan uga helo Linux oo aad isticmaasho aan aragno faallooyinka ...
Dakhliga maalinlaha ah iyo aniga wax dhibaato ah ma qabin.
salaan iga timid Mexico.
Dhammaan ahaan ahaan, waa dhakhso, kaliya waxaan helay hal shay oo aan isticmaalayo Linux Mint 14 nadia x64 waxayna ii sheegaysaa inaan galo Ubuntu, malaha waa kooxda lint mintka ah ee aan waqti u helin inay beddelaan wakiilka isticmaalaha
deade halkan USA oo leh isku xirnaan 100mbps ah goobtu xoogaa gaabis ayey ku tahay baaritaannada qaarkood, laakiin haddii kale waa cabir ahaan 🙂
Hagaag, wax dhibaato ah kama jiraan halkan around
Khalad kasta oo dhaca waan kula socodsiin doonaa.
Waana inaan qiraa in walxaha si dhakhso leh u rartaan
Laga soo bilaabo Czech Republic wax kasta oo nidaam ah oo aad u dhakhso badan 😀
La mid ah ka Peru oo aad uga dhakhso badan waxay umuuqataa in lagu sameeyay Drupal.
mararka qaarkood waxaan ku arkaa gaabis gaar ah waqtiga aan daabacayo faallo, halkii daaqadaha hadda aan helo ubuntu, ama waxaa jira waqtiyo marka tux soo baxo.
Hagaag, waxkastoo caadi ah ayaan arkayaa: O
Waayadan dambe rakibidda aan ku qabtay Sabayon waa inaan ku rakibaa Wakiilka Isticmaalaha ee Chrome, ka hor intaanan taas sameyn.
Bittorrent Sync: waa baddal bilaash ah "daruurta"